နိုင်လွန်ပုဇွန် | Wutyee Food House
« ဘေဂျင်း (Beijing) ထမင်းကြော်
ကြက်သား ပလာတာ »
August 26, 2010 by chowutyee
နိုင်လွန်ပုဇွန်ကို တရုတ်လို ဟာကို လို့ခေါ်ပါတယ်။ နိုင်လွန်ပုဇွန်ကို မနက်စာ Dimsum အဖြစ် စားသောက်ဆိုင်တွေ အများအားဖြင့် ၀ယ်စားကြပါတယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ ဆိုင်မှာ ၀ယ်စားတာထက် အိမ်မှာ စိတ်ကြိုက် လုပ်စားရတာကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
နိုင်လွန်ပုဇွန် လုပ်ရတာတော့ ပေါက်စီလိုပဲ သိပ်မခက်ခဲလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနေ့က နိုင်လွန်ပုဇွန် လုပ်စားဖြစ်တာနဲ့ ချက်နည်း နှင့် တကွ လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ပုံနှင့် တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရသာကောင်းမွန်သော နိုင်လွန်ပုဇွန်ကို အိမ်မှာ လုပ်စားရင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ…
ဂျုံဒိုး အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ Wheat Starch (or) Wheat Flour (နိုင်လွန်ပုဇွန် လုပ်သည့် ဂျုံ) – ၂၂၀ ဂရမ်
၂။ Topical Flour – ၅၀ ဂရမ်
၃။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၄။ ရေနွေး – ၁၇၀ မီလီ (Rice-cooker ဆန်ချိန်ခွက် တစ်ခွက်)
အစားသွပ်ရန် အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ ပုဇွန် ဘော်ကျိစ် – ၁၅ကျပ်သား (ခေါင်းဖြုတ် အခွံနွာပြီ ၃ပိုင်းပိုင်းပါ)
၂။ မုန်လာဥနီ – တ၀က် (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၃။ ဆား- လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၄။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၅။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ၁ပုံ
၆။ နှမ်းဆီ (sesame oil) – လက်က်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံ
၇။ ကော်မှုန့် (corn flour) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ အခွံနွာထားသော ပုဇွန်ကို ၃ပိုင်းပိုင်းပြီ နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားသော မုန်လာဥနီဖြင့် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဆား၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ နှမ်းဆီ၊ ကော်မှုန့် တို့ဖြင့် အားလုံး ရောနုယ်ထားလိုက်ပါ။
၁။ အရင်ဆုံး Wheat starch ဂျုံများကို ဇလုံတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ) ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးမှ ရေနွေးများကို လောင်းထည့်ပြီ တူနဲ့ ရောနယ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ဒိုးသားများကို ခေတ္တာမျှ အအေးခံပြီမ ဒိုးသား ချော့မွေအောင် နာနာလေး ၃မိနစ်ခန့် နုယ်ပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဒိုးသားကို အောက်ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း အရှည်လိုက်လိမ့်လိုက်ပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ဒိုးချောင်းကို အတုံးလေးများ အခု၂၀ရအောင် လှီးလိုက်ပါ။ (မကပ်စေရန် ဓားတွင် ဆီသွပ်ထားပါ)
၆။ ထို့နောက် အတုံးလေးများကို လက်ဖြင့် အလုံးလေးများ ပြန်လုံးလိုက်ပါ။
ရ။ ဒိုးသား အလုံး တစ်ခုကို ယူ၍ တလိမ့်တုံးဖြင့် မလိမ့်ခင် မကပ်စေရန် ပလက်စတစ်ခံထားပေးပြီးမှ အ၀ိုင်းပုံုံ ဖြစ်အောင် လိမ့်ပေးပါ။
၈။ ပါးနိုင်သမျှ ပါးအောင် လိမ့်ပေးပါ။
၉။ ဒိုးပြား ရပြီဆိုလျှင် အောက်ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း အဆင့်ဆင့် ပုံဖော်ပေးပါ။
၁၀။ ပုံဖော်ပြီးလျှင် အစားသွပ်ရန် ပုဇွန်(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်)ကို အစားသွပ်လိုက်ပါ။
၁၁။ အစားသွပ်ပြီးလျှင် ထိပ်ပိုင်းလေးကို ပြန်ပိတ်ရပါမည်။
၁၂။ ထိုနည်းအတို်င်းကျန် နိုင်လွန်ပုဇွန် များကို ပုံဖော်သွားပါ။
၁၃။ ပြီးလျှင် ဒန်ပေါင်းအိုးကို ဆီသုတ်၍ နိုင်လွန်ပုဇွန်များကို ထည့်လိုက်ပါ။
၁၄။ ၁၀မိနစ်ခန့် ပေါင်းပေးပြီ ပူပူနွေးနွေးလေး နိုင်လွန်ပုဇွန်များကို ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ဖြင့် တွဲဖက် စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 44 Comments
on August 26, 2010 at 4:37 am | Reply avocado
မ၀တ်ရည် တအားတော်တယ် ကြိုက်တယ် လုပ်စားကြည့်မယ်
on August 26, 2010 at 4:38 am | Reply chowutyee
Avocado ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ.. လုပ်စားကြည့်ပါ.. လုပ်ရတာ အ၇မ်းမခက်ပါဘူးနော်.. ;P
on August 26, 2010 at 5:21 am | Reply နွေးနေခြည်
အချိန်ရရင်တော့ လုပ်ကြည့်မယ်။ ကြိုက်တယ်။ ဒင်ဆန်း စားရင် အဲဒါ အမြဲမှာတယ်။ ဒီမှာကျတော့ ဈေးကြီးတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားမှ တွက်ခြေကိုက်မယ်.. ဟီးးး 😀
on August 26, 2010 at 10:55 am | Reply chowutyee
ဟားဟား… ဟုတ်ပ ၀ယ်စားရတာ ဈေးကြီးတယ်နော်.. 🙂
on August 26, 2010 at 7:44 am | Reply ချော
တကယ်ပါဘဲ.. လုပ်တော့ စားချင်တယ်..
နည်းနည်းပျင်း သလိုဘဲ ဟိဟိ..
on August 26, 2010 at 10:56 am | Reply chowutyee
လုပ်ပုံ အဆင့်အဆင့် သေချာ ပုံတွေ အများကြီးတင်ထားလို့ပါ မချော။ လုပ်ရတာ နည်းနည်းတော့ လက်ဝင်ပေမယ့် လုပ်ရတာ ဆိုလို့ ဒိုး ပုံဖော်တာလေး တစ်ခုပဲ ရှိတာပါ။ အားရင်တော့ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. ;P
on August 26, 2010 at 8:43 am | Reply m
Wheat Starch (or) Wheat Flour ကဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲ ဝတ်ရည်…
on August 26, 2010 at 10:57 am | Reply chowutyee
m ရေ CityMart ဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်.. plz try it!! 🙂
on August 26, 2010 at 8:46 am | Reply fatty
အရမ်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ အာမထိ ရှာမထိ မျိုနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ် 😛
Warning to Fatty!!! Dont’ make food for you anymore…
on August 26, 2010 at 9:03 am | Reply cho
wow that one is yummy but seem quite difficult to do…ko lote kyae ma bae eat ya top mal hee 😉
on August 26, 2010 at 10:59 am | Reply chowutyee
ဟားဟား.. ကိုယ်ရန်ကုန်လာရင် နေ့တိုင်း နိုင်လွန်ပုဇွန်ပဲ ကျွေးတော့မယ်…. ဟီးဟီး 🙂
on August 26, 2010 at 10:24 am | Reply Pearl Phyu
အရမ်းစားချင်တာပဲ.. အရမ်းကြိုက်တာ… လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်.. ဒိုးပြားက Ready Made ဝယ်လို့ရလားဟင်?
on August 26, 2010 at 11:02 am | Reply chowutyee
ဒိုးပြားက Ready Made တော့ မရောင်းဘူးနဲ့တူတယ်..
on August 28, 2010 at 7:23 pm | Reply moe moe hlaing
i like u cook and i try all the time after i visit your web site. u r so talent
on August 29, 2010 at 10:39 am | Reply chowutyee
Many Thanks Ma Moe Moe Hlaing!!! 🙂
on August 30, 2010 at 11:06 am | Reply jewel
ဒိုးပြားလုပ်တဲ.wheat flour ကဘာအမျိုးအစားဖြစ်ဖြစ်၇ပါသလား၇ှင်
on August 30, 2010 at 11:09 am | Reply chowutyee
Jewel ရေ wheat flour ဖြစ်ရင် ရပါပြီ ဘယ်အမျိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပါ… 😛
on August 31, 2010 at 8:18 am | Reply cherry
is wheat flour the same as all purpose flour or not?
on August 31, 2010 at 8:33 am | Reply chowutyee
wheat flour က ရိုးရိုးဂျုံနဲ့ မတူပါဘူး…. ပိုပြီ နူးညံ့ပါတယ်… Supermarket တွေမှာ wheat flour ကို အလွယ်တကူ မေးပြီ ၀ယ်နိုင်ပါတယ်…
on August 31, 2010 at 3:26 pm | Reply lyk
အိုး .. သိပ်စားကောင်းမှာပဲ ..
အဆင်ပြေတဲ့ တရက်လုပ်စားဖြစ်အောင်လုပ်စားမယ် ..
on September 1, 2010 at 3:44 am | Reply chowutyee
yes plz try it
on September 2, 2010 at 5:38 am | Replyုkaykhine
အရမ်းကြိုက်တယ်…ကြိုးစားပြီးစမ်းလုပ်ကြည့် မယ်.thank you!
on September 2, 2010 at 6:39 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် လုပ်ကြည့်ပါ… စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်
on September 19, 2010 at 11:12 am | Reply shinlay
အတော်ပဲ wheat flour ၀ယ်လုပ်ကြည့်ပါ့မယ်။
on September 20, 2010 at 1:48 am | Reply chowutyee
Plz try it!! 🙂
on November 10, 2010 at 4:56 pm | Reply moe
thanks wutyee ,I everyday arrive to your food house. sometime I didn’t left some message for you .now very easy for me what I want to cook no need thinking so much just see to your side only,
I very like deamsam but I eat very seldom hear coz of too much expensive now I can try to cook
do you know other deamsam ? I would like to cook it.I will try tomorrw I already have whear flour and shrimps .
on May 23, 2011 at 10:45 am | ReplyွှThandar Kyaw
ချိုက သိပ်တော်တာပဲ။ လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်
on August 3, 2011 at 3:34 pm | Reply Su Myat Nandar
on August 10, 2011 at 8:46 am | Reply chowutyee
on August 6, 2011 at 9:51 pm | Reply sein
i know wheat flour. IsTopical Flour the same as Tapioca flour?
on August 10, 2011 at 8:38 am | Reply chowutyee
on September 5, 2011 at 10:42 am | Reply Win Pa Pa
မ၀တ်ရည်ရေ……wheat flour ကို super market တွေမှာ ရှာတာ ရှာမရဘူးဖြစ်နေလို့ plain flour နဲ့လုပ်ကြည့်တာ မာလို့စားမရဘူး…..super market တွေအပြင် ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ ရသေးလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ….ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါအုံး………….
on November 9, 2011 at 9:17 pm | Reply sein
Topical Flour မ​ပါ​လဲ လုပ်လို့​ ရ​ပါ​လား၊ ရှာ​တာ မေ​တွ့​​လို့​​ပါ၊ ဘာ အမ​ည် ရှိ​ပါေ​သး​လဲ။
on November 18, 2011 at 4:23 pm | Reply chowutyee
လုပ်လို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းမာသွားမယ်..
on January 11, 2012 at 6:28 am | Reply nandar
ညီမ အမ မေးလ်ကို နေတိုင်းလာဖတ်ချင်တယ်…..
အမဒီနေ့သူများပို့ ပေးတဲ့ မေးလ်လေးကနေလာကြည့်ရင်
နဲ့ရောက်လာတာ….. အမြဲတမ်း အမ လာကြည်ချင်တယ်….
on January 17, 2012 at 10:09 am | Reply chowutyee
မရေ ဒီဘလောက်မှာ email subscription လုပ်ထားရင် ဟင်းသစ်တင်တိုင်း မဆီ အီးမေးပို့ပေးပါတယ်.. 🙂
on January 11, 2012 at 7:00 am | Reply nandar
on April 14, 2012 at 6:41 am | Reply myat
မ၀တ်ရည်ရေ အဆင်ပြေရင် dim sum အခြားအမျိုးအစားတွေလည်းတင်ပေးအုန်းနော်…ကျေးဇူးပါ..အားပေးနေပါတယ်..
on April 15, 2012 at 9:11 am | Reply chowutyee
on April 18, 2012 at 9:11 am | Reply myat
မ၀တ်ရည်ရေ နိုင်လွန်ပုဇွန်က အဆင်လည်းမပြေဘူး …..ညီမ ညံ့လို့ ပဲဖြစ်မှာပါ…transparent မဖြစ်ပဲ ထူထူကြီးဖြစ်နေတယ်…ဖြူဖြူလေးလည်မဖြစ်ဘူး..၀ါဝါကြီး…စိတ်ညစ်ပါတယ်…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်…ပြောပြပေးပါအုန်း..ကျေးဇူး…..
on April 19, 2012 at 1:44 pm | Reply chowutyee
ဂျုံတစ်မျိုးလိုနေတာ ဖြစ်ဖို့များတယ် ညီမ။ သူမှာ ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေက ရှာရလည်း ခက်တော့ လုပ်တဲ့နေရာမှ အခက်တွေ့တာ ဖြစ်မယ်.. အမှန်က ကြည်ကြည်လေးဖြစ်ရမှာ..
on May 10, 2012 at 3:43 pm | Reply may
အမ ညီမကကျတော့လုပ်လို့ကို မရတာ။ဂျုံကလည်း wheat flour ပဲ tropica flour နဲ့ အဲဒါ ဂျုံက ဖွယ်ဖွယ်ကြီးဖြစ်နေတယ် ဆွဲလိုက်ရင်ပါမလာပဲလေ. ပြတ်ပြတ်သွားတယ် အတုံးက ဘာလို့လည်းမသိဘူး။အဖြေရှာမရဖြစ်နေတယ်။
on May 15, 2012 at 2:44 pm | Reply aungaung